सेन्ट एन्थोनी को लागी प्रार्थना साँचो प्रेम [+ बलियो] पाउन को लागी?
प्रेम पाउन स्यान एण्टोनियोलाई प्रार्थना, साँचो प्रेमको लागि खोजी त्यस्तो चीज हो जुन धेरै व्यक्तिलाई व्यस्त र चिन्तित राख्छ। तिनीहरू धेरै पटक एक बनाउनको लागि आवश्यक छ किन यो छ प्रेम पाउन स्यान एण्टोनियोलाई प्रार्थना, तिनीहरूलाई यो पत्ता लगाउन मद्दत गर्न।
एक व्यक्ति को महसुस को लागी आफ्नो परिवार को लागी सक्षम हुन को लागी समावेश छ र यसको लागि, विशाल बहुमत, उनीहरु लाई एक प्रक्रियाको भर मा तिनीहरु संग एक साथी आवश्यक छ।
साँचो प्रेम यति व्यावसायिक भयो, यति ओभररेट भयो कि धेरै चोटि हामी फिल्म, पुस्तक र समाजमा सामान्य रूपमा उनीहरूले हामीलाई के बेच्छौं त्यसको सटीक मोडेलको लागि हामी पर्खिरहेका छौं।
सर्वप्रथम हामीले त्यस धारणालाई पन्छाउनुपर्दछ, प्रेमले हामीलाई थोरै सोच्ने तरिकामा चकित तुल्याउन सक्छ, त्यसैले जब हामी यो निर्णय लिन्छौं यसलाई प्राप्त गर्न हामी तयार हुनुपर्दछ र खुला हृदयले यसलाई स्वीकार्नुपर्दछ।
प्रार्थना गर्नुहोस् साँचो प्रेम फेला पार्न हामीलाई लामो समय सम्म प्रतीक्षा गर्न र यसलाई कसरी पहिचान गर्ने भन्ने बारे मद्दत गर्दछ।
1 सेन्ट एन्थोनीलाई प्रेम पाउनको लागि प्रार्थना गर्नु के यो कडा छ?
1.1 साँचो प्रेम पाउनको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्
1.2 प्रेम फेला पार्न पाडुआको सेन्ट एन्थोनीलाई प्रार्थना
1.3 स्यान एण्टोनियोलाई प्रार्थना गर्नुहोस् तपाईंको जीवनको प्रेम पाउन
2 म सान एन्टोनियोलाई3प्रार्थना भन्न सक्छु?
सेन्ट एन्थोनीलाई प्रेम पाउनको लागि प्रार्थना गर्नु के यो कडा छ?
यो बलियो र शक्तिशाली छविशेष गरी यदि तपाईं विश्वास र हृदयबाट यो गर्नुहुन्छ भने। नयाँ करारको उनको असंख्य विवरणहरूमा प्रभुको वचनले हामीलाई सिकाउँदछ, प्रेमले सबै कुरा गर्न सक्दछ, सबै कुरा आशा गर्न सक्छ, सहन गर्न सक्दछ र कहिले पनि बन्द हुँदैन।
यस तरीकाले हामी यो निश्चित रूपमा थाहा पाउन सक्छौं कि यो प्रेम हो वा अरू केहि महसुस गरिरहेको छ। धेरैले भन्छन तिनीहरू प्रेम गर्दछन् र समय त्यसो गर्न बन्द गर्दछन्, यो, परमेश्वरको वचनको अनुसार मोर होइन।
हृदय छली छ, सबै भन्दा बढी। भावनाहरू परिवर्तन हुँदैछन् जबकि प्रेम एक निर्णय हो।
सृष्टिकर्तालाई प्रार्थना गर्नु र उहाँलाई प्रेम गर्नु हाम्रो प्रेमको योग्य छ र को छैन भनेर निर्णय गर्न हामीसँग डो to्याइ माग्न, साथसाथै कसले हामीलाई साँच्चै प्रेम गर्ने निर्णय गरेको छ भन्ने कुरा पहिचान गर्नु महत्त्वपूर्ण छ किनकि हामी त्यस्तो अवस्थाबाट पीडादायी हुन सक्छौं।
याद गर्नुहोस् त्यहाँ छैन विश्वासको साथ गरिएको प्रार्थना जुन उत्तर दिईदैनa.
यसले केहि समय लिन सक्दछ वा उत्तर हामीले सोच्दछौं जहाँबाट आउँदछ, तर हामीमा विश्वास छ कि परमेश्वर हाम्रो पक्षमा सबैकुरा गरिरहनु भएको छ र हाम्रो वास्तविक आवश्यकताहरू के हो भनेर उहाँलाई थाहा छ।
साँचो प्रेम पाउनको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्
मेरो भगवान, तपाईं, सिर्जनाकर्ताको रूपमा, सबै प्राणीहरूलाई जीवन प्रदान गर्नुहुन्छ। तपाईं जो सबै कुरा देख्नुहुन्छ र सबै कुरा जान्नुहुन्छ, मेरो आँखालाई मेरो जीवनमा निर्देशित गर्नबाट रोक्नुहोस् र हेर्नुहोस् कि मलाई कसरी सुधार गर्ने छ त्यो व्यक्ति हुन जो साँचो प्रेम पाउन सक्छ।
यदि मेरो चरित्र सबैभन्दा उपयुक्त छैन भने, यदि मेरो जीवनको बाँच्ने तरिका र बाँच्ने तरिका प्रेमको साथ कभरड्स छैन भने, मलाई भन्नुहोस्। कृपया मलाई मेरो हृदयमा तपाईंको वचनको बारेमा मलाई थाहा पाएका सबै कुरा भन्नुहोस्। मेरो कानको नजिक जानुहोस् र मलाई के गर्ने सुझाव दिनुहोस्। दिनदिनै मलाई नत्याग्नुहोस्, त्यो पक्का प्रेमको लागि पर्खिरहनु, मलाई थाहा छैन कि म परिवर्तन हुनुपर्दछ।
स्वर्गका परमेश्वर, सर्वोच्च र अद्भुत हुनुहुन्छ, म तपाईंमा विश्वास गर्छु। मलाई थाहा छ कि तपाइँको वचन मेरो हृदयमा शुद्ध पानी जस्तै छ जुन नदीमा बग्दछ र यसका सबै मार्गहरू सफा गर्छ। म तपाईंको वचन र सबै सल्लाहहरूको पर्खाइमा छु। म तपाइँको आज्ञाहरूलाई पर्खिरहेछु। म तपाईंलाई मेरो गहिराइमा स्वागत गर्न चाहन्छु। मलाई थाहा छ कि तिनीहरू निष्पक्ष, ज्ञानी र सत्य हुनेछन, मेरो प्रेम जीवनको लागि सुविधाजनक।
किनकि तपाईं हुनुहुन्छ न्याय, बुद्धि र सत्य। आकाशको ईश्वर, म तपाईंलाई वाचा गर्दछु कि म तपाईको विशेषज्ञ सल्लाहलाई अभ्यासमा राख्छु र तपाईले मलाई मार्क गरेको मार्गलाई म सधैं अनुसरण गर्नेछु। मलाई यस मार्गको माध्यमबाट मार्गनिर्देशन गर्नुहोस् ताकि म पक्का गर्नका लागि सही मार्ग जान्छु, सँधै तपाईंको प्रेमको कानूनहरू अनुसार। म प्रार्थना गर्दछु कि मेरो भविष्यको साथीले सँधै मलाई सम्मान गर्दछ र मलाई कन्डिसन बिना नै प्रेम गर्दछ र मलाई अरू सबै भन्दा उच्च मन पर्छ।
यो प्रार्थनाले हाम्रो प्राथमिकतालाई पन्छाएर गर्नुपर्दछ, हामीले भावनाहरू भन्दा के महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा सोच्नुपर्दछ, जुन बर्षहरूमा रहन्छ।
प्रेम कहीं पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ तर साँचो प्रेम दिनदिनै निर्माण हुन्छ। यो एउटा टोली कार्य हो जहाँ हामी सबै चीजहरूको सृष्टिकर्ता भगवानको मद्दतमा भरोसा गर्न सक्छौं।
यदि यो साँचो प्रेम प्राप्त गर्न सम्भव छ र यदि हामी प्रार्थनाको शक्तिमा विश्वास गर्छौं भने सम्भावनाहरू बढी हुन्छन्। हाम्रो आफ्नै शब्दहरु प्रयोग गरी प्रार्थना गर्नुहोस् र जवाफको लागि प्रतिक्षा गर्नुहोस्।
प्रेम फेला पार्न पाडुआको सेन्ट एन्थोनीलाई प्रार्थना
धन्य संत एन्थोनी, सबै सन्तहरु को दयालु, भगवान को लागी तपाईको प्रेम र सृष्टिहरु को लागी तपाईको प्रेमले तपाईलाई चमत्कारी शक्तिहरु लाई योग्य बनायो।
तपाईंको शब्दहरूको साथ तपाईंले समस्या वा चिन्ताहरू र चमत्कारहरू भएका मानिसहरूलाई तपाईंको मध्यस्थताका माध्यमबाट सहयोग गर्नुभयो। म तपाईंलाई मेरो लागि प्राप्त गर्न बिन्ती गर्छु ... (तपाईंको अनुरोध व्यक्त गर्नुहोस्).
कोमल हृदय र प्रिय संत, तपाईको हृदयले सँधै मानवीय करुणाले भरिएको, मीठो बालक येशू, जो तपाईको हतियारमा बस्न मन पराउँछु, को लागी मेरो बिन्ती छ, र सँधै मेरो हृदयको कृतज्ञता पाउनुहुन्छ। (हाम्रा तीन जना आमा बुबा र तीन हिल मरियमलाई प्रार्थना गर्नुहोस्।)
पडुआका सेन्ट एन्थोनी एक संत हुन् जसलाई हामीले साँचो प्रेम पाउनको लागि प्रार्थना गर्नै पर्छ। उसले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्छ प्रेम पाउन, तपाईंको आत्मीय साथी, आधा, तपाईंको जीवन पूरक।
यो अर्को व्यक्ति हो जुन तपाईंको लागि विशेष रूपमा सिर्जना गरिएको हो, श that्का नगर्नुहोस् कि यो हो।
प्रार्थनाहरू शक्तिशाली छन् र हामीलाई शक्तिहरू राम्रोसँग डो to्याउन मद्दत गर्दछ जसले गर्दा हामी निराश नहुनु वा कुनै पनि नभएको प्रेम पाउन विश्वास गर्ने त्रुटि।
स्यान एण्टोनियोलाई प्रार्थना गर्नुहोस् तपाईंको जीवनको प्रेम पाउन
सेन्ट एन्थोनी, गौरवशाली र तपाईका चमत्कारका लागि प्रख्यात छन्, मलाई भगवानको अनुग्रह दिनुहोस् मेरो इच्छा पूरा गर्न (एक पार्टनर प्राप्त गर्नुहोस्)।
पापीहरू जस्तो म जस्तो दयालु छु, मेरो गल्तीलाई नहेर्नुहोस्, मेरा गल्तीहरू क्षमा गर्न परमेश्वरको महिमालाई ध्यान दिनुहोस्, मैले तपाईंलाई कडा अनुरोध गरेको छु। चमत्कारहरुका महान् सेन्ट एन्थोनी, पीडितहरुको सान्त्वना, म तपाईको घुँडा टेक्न म तपाईको सहायताको लागि र तपाई मेरो गाईड बन्नु भनेर। म तपाईको सहयोगमा एक अनुरोध लिएर आएको छु र यसले मेरो पीडित र कृतज्ञ हृदयलाई मुक्त गरेको छ।
मेरो लागि तपाईंको भक्ति र प्रेमको प्रस्ताव स्वीकार्नुहोस्। म तपाईं, सेन्ट एन्थोनी, भगवान र मेरो छिमेकीलाई माया गरेर बाँच्ने आफ्नो प्रतिज्ञा नवीकरण गर्दछु।
मेरो अनुरोधको साथ मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्, मलाई एक दिन स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने अनुग्रह दिनुहोस्, सदासर्वदा प्रभुको कृपाको गीत गाउनको लागि।
एस एन एन्टोनियो तपाइँको कुरा सुन्नेछ र प्रक्रियामा मद्दत गर्दछ ताकि तपाइँ तपाइँको जीवनको प्रेम पाउन सक्नुहुन्छ।
एकचोटि तपाईंले यो फेला पार्नुभयो भने, तपाईं उहाँसँग आफ्नो चरणहरू र उहाँका निर्णयहरू जहिले पनि मार्गदर्शन गर्न जारी राख्न सोध्न जारी राख्न सक्नुहुन्छ।
प्रार्थनाको शक्ति छ, विश्वास र विश्वास छ कि उसले बाँकी काम गर्छ।
म सान एन्टोनियोलाई3प्रार्थना भन्न सक्छु?
के तपाईं साँचो प्रेम पाउनको लागि प्रार्थना भन्दा बढी प्रार्थना गर्न चाहनुहुन्छ?
यो गर्न सक्नुहुन्छ।
सीमाहरू बिना नै सबै प्रार्थनाहरू गर्न सक्नुहुन्छ र गर्नुपर्दछ। तिनीहरू समस्या बिना सबै सँगै प्रार्थना गर्न सकिन्छ।
याद गर्नुहोस् कि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको परमेश्वर र स्यान एन्टोनियोमा धेरै विश्वास हुनु हो।
यस तरीकाले तपाईले आफ्नो प्रेम पाउनको लागि अधिकतम मद्दत प्राप्त गर्नुहुनेछ।